Inkampani yaseMelagro - Magazine System Magazine
Aug 01, 12: 10 am
Izithombe zensizakalo ye-AVO
NgoJulayi 30, iPhini Lombusi Wokuqala we-Vladimir Region Alexander Remiga kanye noMqondisi woMnyango Wezolimo esifundeni saseVladimir Konstantin Demidov bathatha uhambo lokuya esifundeni saseMelenkovsky, lapho kukhiqizwa khona inqwaba yamazambane nemifino yalesi sifunda. Abaholi bahambele izinhlangano ezi-4 zezimboni zezolimo: i-OOO Melagro, Plemzavod Ilkino, SEC Dmitrievy Gory kanye neMelenkovsky cannery. Inzuzo ephelele yonyaka yalezi zinkampani idlula ama-ruble ayizigidi ezingama-380.
I-LLC "Melagro" ibingowokuqala ukwamukela izivakashi. Ibhizinisi ingenye yabakhiqizi abahamba phambili bama-potato chips. Indawo yokutshala ingamahektare angama-750-830 ngonyaka, isivuno esikhulu samazambane sifinyelela kumathani ayizinkulungwane ezingama-25-27. Eminyakeni emi-2 eyedlule, abakhiqizi baba ngabaholi ekuhanjisweni kwemikhiqizo yezolimo.
“Ngonyaka owedlule, iMelagro yathutha amathani ayizinkulungwane ezingama-5,5 amazambane eYurophu. Le nkomba ikhombisa ukuthi inani lemikhiqizo liyanda minyaka yonke. Ubuchwepheshe besimanje bethulwa futhi busetshenziswa ekukhiqizeni, okusivumela ukuthi sikhiqize umkhiqizo osezingeni. Engxenyeni yokuqala ka-2020, inkampani yanikezwa ukwesekwa kwezezimali: ngaphansi kohlelo lukahulumeni, kwabekwa ama-ruble ayizigidi ezingama-2,2 kwisabelomali sombuso, ”kugcizelela u-Alexander Remiga.
Bangama-ruble angaphezu kwezigidi ezingama-1 abelwe izabelomali zombuso nezesifunda ukuxhasa amabhizinisi ezolimo nezimboni esifundeni saseMelenkovsky engxenyeni yokuqala ka-2020. Eminyakeni emibili eyedlule, kwakhiwa izakhiwo zokumanzisa okusanhlamvu ezisebenza kahle kakhulu endaweni yesitshalo sokuzalela i-Ilkino kanye neDmitrievy Gory SPK. Lokhu kwenze ukuthi kwandiswe ukukhiqizwa nokuphepha kwezilimo okusanhlamvu.
"Wonke amabhizinisi ama-4 esiwavakashele namhlanje abamba iqhaza ezinhlelweni zikahulumeni zokuthuthukisa izakhiwo zezolimo, athola uxhaso kanye nokuxhaswa," kugcizelela uKonstantin Demidov.
Njengoba kuphawuliwe ngu-Alexander Remiga, abaphathi bezifunda babhekene nomsebenzi wokwandisa ukuthunyelwa kwemikhiqizo yezolimo kusuka esifundeni kuya ngaphezu kuka- $ 2024 million ngo-313. Iphrojekthi "Ukukhishwa kwemikhiqizo yezolimo yesifunda seVladimir" isivele ikhombisa amandla amahle.
"Manje kubalulekile ukuthi kuqinisekiswe ukubamba iqhaza kwezimboni zezolimo esifundeni iVladimir ezinhlelweni zikahulumeni, silungiselele yonke imibhalo edingekayo futhi silethe izicelo zonyaka we-2021 ngesikhathi esifanele," kugcizelela iPhini Lombusi Wokuqala.
Source: Ukuphathwa kwesifunda seVladimir
Tags: Isifunda saseVladimiramazambane akhulaUkukhishwa kwamazambane